Finland waxaad sharciga deganaanshaha la’aantiis wax ku baran kartaa 90 maalmood wixi ka yar. Waxaa laga yaabaa in waxbarashada 90ka maalmood ka yar dartood aad u baahato fiiso. Ka hor inta aadan helin sharciga deganaashaha waa in aad Finland ka heshaa boos waxbarasho. Marka uu ku aqbalo machad waxbarasho oo Finland ku yaal, ayaad codsan kartaa sharciga deganaanshaha. Boggan waxaa lagu sheegayaa waxyaabaha ay tahay in aad sameyso, haddii aad dooneyso in aad Finland waxbarasho darteed ugu soo guurto.
Bogga InfoFinland Adeega caafimaadka ee Finland , waxaa ka heleysaa macluumaad kusaabsan daryeelka caafimaadka Finland.
Ceymiska ardaygaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Shardiga lacagta nolosha ee ardayga ku xiranLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Macluumaad laxiriira ruqsada daganaanshada ee ardaydaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
ku jirto dhaqdhaqaaqa caalamiga ah ee barnaamijka Midowga ama barnaamijka noocyada badan, ama
U soo dirista Finland wargelin dhaqdhaqaaq Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Marka aad Finland u soo guurto, waa in aad tagtaa goobta adeegga Hay’adda dijitaalka iyo macluumaadka dadka ee kuugu dhow si aad degane ahaan isaga diiwaangeliso. Faahfaahin dheeraad ah ka sii aqri bogga InfoFinland Isu diiwaangelin degene .
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan codsasahda ogolaanshaha sii-socda ka sii akhri bogga InfoFinland Ogolaanshaha sii-socda .
Ogolaanshaha sii-socda ee ardaygaLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Faahfaahin dheeraad ah oo ku saabsan sharciga deganaanshaha ee qofka shahaadada qaatay ka aqri bogga InfoFinland Shaqo u imaanshaha Finland .
Shaqo ku tababarashada FinlandLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa
Linkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisaStudyinfinland.fi
Macluumaad loogu talagalay ardayda ajaaniibta ahLinkigu wuxuu ku geynayaa adeegga bannaakiisa